दहीचिउरा खाने असार पन्ध्र – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
दहीचिउरा खाने असार पन्ध्र
२०७१ असार १५, आईतवार ०४:०४ गते
‘पानीको भल बग्छ खेतभरि
भिज्छन् सबैका गरा
आयो फेरि घुमीफिरी असार पन्ध्र
उल्लास बोकी नयाँ ।’
कवि कमल कोइरालाले भनेजसरी घुमीफिरी हाम्रो आँगनीमा असार पन्ध्र त आयो, तर किसानलाई यतिबेलाको असार पन्ध्रले सायदै उल्लास ल्याएको छ ! असार पन्ध्रसम्म त रोपाइँ सकेर मैझार गर्नुपर्ने हो, तर कति किसानको खेतबारी भिजिसकेका छैनन् । रोपाइँ हुनेगरी पानीको भल बगेकै छैन । रोपाइँको सुरसारै छैन । बीउ ब्याडमा खुम्चेर बसेका छन् । लाग्छ, ती बीउले पनि भने होेलान् ः
‘हे किसान, हामीलाई कहिले बारीमा रोप्छस् ?’
आकाशे पानीको पर्खाइमा ढुकेर बसेका किसानलाई असार पन्ध्रले खुसी ल्याएको छैन । उल्लास थपेको छैन, तैपनि दहीचिउरा खाने असार पन्ध्रलाई उनीहरुले भुलेका छैनन् । बीउलाई रोप्न समय कुरिरहेका छन् । इन्द्रसँग पानी मागिरहेका छन् । इन्द्रले खै, किन नपारेका हुन् पानी ? किसानले यसो भनेका छन् ः
सिमसमे पानी होइन
रोपाइँ हुने पानी पारिदेऊ ।
सरकारले असार पन्ध्रलाई धान दिवसका रुपमा मनाउँदै छ । सरकार धान दिवस मनाइँरहँदा किसान रोपाइँ गर्न नपाएर ओठतालु सुकाइरहेका छन् । चिटचिट पसिना निकालेका छन् । मनलाई अमिलो बनाएका छन् । धमिलो पारेका छन् । यो अमिलो र धमिलो मन कहिले स्वच्छ र सफा हुने हो, पत्तो छैन ।
आकाशतिर दिनरात हेरेर पानीको पर्खाइमा बसेका छन्, किसान । किसानका आँखा पनि पट्टाइसके, आकाशतिर हेर्दाहेर्दै । सिमसिमे पानीले गिज्याएर गयो । असारको आधाआधी समय ढल्के पनि रोपाइँ हुने वर्षा हुन नसक्दा सबैलाई पिरलो बनाएको छ । यसपटक, ढिलो पानी पर्नाले बीउ राख्न ढिलो भएको थियो । बीउ रोप्ने बेला पनि भएको छैन ।
‘रोपाइँ नभए पनि दहीचिउरा खाएर असार पन्ध्र मनाउन पर्ला नि !’ आफ्नो पुरानो संस्कृतिलाई बिर्सन हुँदैन’– शुक्रनगरका दीपक खनालले भने, ‘असार पन्ध्रमा एउटा गरा रोपाइँ गर्न पाए पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला हगि ! बालबालिका बीउ ओसार्थे, रोपारेहरु बीउ रोप्थे, हिलो छ्यापाछ्याप गर्थे, कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो क्षण । त्यो रमाइलो दिन चाँडो नआए पनि दहीचिउरा खाएर रमाइलो गर्ने हो ।’
‘जेठको अन्तिम साताबाट सुरू हुने रोपाइँ असारको दोस्रो साता पूरा हुन्थ्यो र असार पन्ध्रमा खुसीयाली मनाएर सबै जना बसेर दहीचिउरा खाने गरिन्थ्यो । तर, यसपटक रोपाइँलाई थाँती राखेर दहीचिउरा मात्र खाने भइयो’, विगतलाई सम्झँदै दीपकले भने, ‘पोहोर–परार उनले असार पन्ध्रमा केही गरा भने पनि रोपेका थिए रे । यसपटक त खै, पानी ढिलो पर्नाले आपत् प¥यो तर पनि केही छैन । अब पानी पर्ने रामै्र संकेत दिएको छ ।’
पहिलेजस्तो खुसी दिएन यसपटक असार पन्ध्रले किसानलाई । तर पनि किसानहरु दहीचिउरा खान भने नभुल्ने गरी बसेका छन् । आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउन बिर्सने छैनन्, उनीहरु । जसोतसो रोपाइँको सुरसार गर्छन् । खेत खनजोत गरी रोप्नका लागि तयारी गर्छन् । त्यही तयारीमै भए पनि दहीचिउरा खान्छन् । कतिले रोपाइँ गरेरै दहीचिउरा खाने सुरसारमा छन्, किसानहरु ।
असार महिनालाई मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय मानिन्छ । तर, धेरै किसानको यसपटक मानो खाने काम त भएको होला, तर मुरी उव्जाउने कामको चटारोले छोइसकेको छैन । बिस्तारै छुनेछ भन्ने आशा सँगालेका छन्, किसानले । असारे चटारोले नछोए पनि केही किसानले रोपाइँ कार्यक्रमको आयोजना नै गरी असार पन्ध्र मनाउने सुरसार गरेका छन् । आफ्नो संस्कृति जोगाउन लागिपरेका छन् ।
रेडियो, टेलिभिजनले त्यही कार्यक्रमलाई पछ्याएर आफ्नो संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गरेको छ । स्थानीय टेलिभिजनमा कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रुपमा देखाइन्छ भने रेडियोमा प्रत्यक्ष सुनाइन्छ । कम से कम आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने काम रेडियो, टिभीले पनि गरेका छन् । मान्नैपर्छ उनीहरुलाई पनि । किसानको आवाज कम से कम जनतासामु ल्याएका छन्, रेडियो र टिभीले । यसले पनि संस्कृतिलाई जोगाएको छ ।
‘असार पन्ध्रमा काम गरेर दहीचिउरा खानुको बेग्लै मज्जा हुन्छ, तर रोपाइँ कार्यक्रम असार अन्तिमतिर होलाजस्तो भयो’, पश्चिम चितवनका विष्णु काफ्लेले भने । पश्चिम चितवनमा सिंचाइको सुविधा छैन । सबै आकाशे पानीको भर पर्छन् । आकाशबाट पानी नबर्सेपछि रोपाइँको मिति सरेको काफ्लेको भनाइ छ । पूर्वी चितवनका एक चौथाइँ भागमा भने रोपाइँ कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यताका किसानले काम गरेर दहीचिउरा खाने सुरसारमा छन् । सवैको प्रिय भएको छ दहीचिउरा, यो समयमा ।
असार महिना नेपालीका लागि अत्यन्तै मह¤वपूर्ण महिना हो । असारमा धान रोप्ने भएको हुँदा किसानको चटारोको महिना मानिन्छ । यतिबेला किसानलाई बोल्ने फुर्सद पनि हुँदैन । सारा कामहरु बिर्सेर किसानहरु खेतबारीमा व्यस्त भएका छन् । अन्य कुनै योजनाहरु बुन्दैनन् यतिबेला किसानले ।
किसानले अन्न उब्जाएको हुँदा सहरमा बस्नेहरुको मुखमा माड लागेको छ । हामीले खाने प्रत्येक गाँसको किसानको परिश्रम परेको हुन्छ । अन्न उब्जाउनुबाहेक कुनै नौला सपना बुन्दैन, किसानले । कारमा हिँड्ने, महल बनाउने सपना बुन्दैन किसानले । जे–जसरी छ, धेरै अन्न फलाउने सोच हुन्छ किसानको । धन्य र महान् छौ किसान तिमी, तिमीले खेती गरेरै हामीलाई बचाउन सफल भएका छौ ।
अन्नमा सबैभन्दा मह¤वपूर्ण महिना असार हो । धान रोप्ने समय भएर होला, यतिबेला किसानले सबै अरु कामधन्दा बिर्सेर खेतबारीमा व्यस्त भएका छन् । झुत्रे कपडा लगाएर भए पनि आली लगाउने बाउसेदेखि छुपुछुपु बीउ रोप्ने रोपारेहरुको व्यस्त जीवनले यतिबेला सबैलाई लोभ्याएको छ । ‘असारको महिना, काम नगरे कहिले गर्ने हो र !’ कामकाजी महिलाहरु यही भन्छन् ।
‘पहिले–पहिले खूब रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले कम रमाइलो हुन्छ । पहिले हामी हिलोमा लुटपुटिएर पछारी खेल्थ्यौँ । बाउसे गर्नेहरुको बाजी चल्थ्यो, कसले राम्रो र छिटो काम गर्ने भनेर । बाउसे गर्ने पुरूष र महिलाबीच असारे भाका कम्पिटिसन हुन्थ्यो । अनि, खेताला बन्न आएका पातली नानीहरुलाई जिस्काउँदै बाउसे किसानहरु भन्थे ः
‘असारे मासको दबदबे हिलो
छुनलाई घिन लाग्यो
पातली नानीलाई फरिया किन्दा
छ बीस ऋण लाग्यो ।’
खै अहिले ती असारे भाका !’ शुक्रनगरका चेतनाथ ढकालले विगत सम्झँदै भने, ‘अहिले त ती असारे भाका रेडियोमा सुनिन्छ र टिभीमा हेरिन्छ । त्यत्ति हो, त्यही भए पनि पुराना दिनहरुको सम्झना गराएको छ । ती भाका फेरि खेतका आलीआलीमा सुनिन पाए कस्तो हुन्थ्यो होलाजस्तो लाग्छ ! तर खै ! कता हराए, कता बिलाए । काउकुती लगाउँछ अहिले ती भाकाले ।’
असारे भाका हराएको चिन्ता सबैभन्दा बढी किसानलाई लाग्दोरहेछ । अहिले खेतका गराहरुमा असारे भाकाले ठाउँ पाउँदैन । पाइहाल्यो भने हिन्दी गीतले ठाउँ पाउँला, रिमिक्स गीत अटाउला । तर, पुरानो असारे भाकाले ठाउँ नपाउँदा किसानलाई पर्नु पीर परेको छ । पुरानो परम्परालाई अहिलेको पुस्ताले बिर्संदा ढकालले खल्लो महसुुस गरेका छन् ।
उनले भने– ‘अब यो संस्कृति कसले बचाउला ? पहिला दिनरातै असारे भाका गाएर असार महिना कट्थ्यो, अहिले दिनरात आकाश हेरेर असार महिना कट्ने भयो । अहिले त असारे भाका शिला खोजेजस्तो खोज्नुपर्छ ।’
‘असारको मासा कुटेको चिउरा
म कति साँचूँला
सौताको हात दुई कुट्की भात
म कति बाँचूला ।’
‘हाम्रा पालामा यस्ता भाका गाइन्थ्यो, अहिले कहाँ पाउनु बाबै यस्तो भाका ! अहिले त चिच्चाए गीत बन्छ, कराए हिट हुन्छ, कस्तो बेला आयो !’ झन्डै ७५ पुगेका ढकालले भने । ‘हाम्रा पालाको एउटा गीत म अझै गाउँछु है त !’ भाका झिक्दै ढकालले थपे ः
दहीचिउरा खाने हो,
गैरी खेत रोपाइँ गरी
भ्याएर जाने हो
यसपालि त पातली नानीलाई
बोकेरै लाने हो
तानेरै लाने हो ।’
हाहाहा… गीत गाएपछि गलल हाँसे उनी । ‘यस्ता भाका गाए पनि वास्तविक त्यसो भने गरिन्थेन है, गीतमा मात्र भनिन्थ्यो’, उनले थपे । वास्तवमा ढकाललाई उनीपछि यो गीत कसले गाइदेला भन्ने पिरलो छ । आफूले बाबुबाजेबाट सिकेका यो भाका अबको पुस्ताले रूचाउँदैन भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छ । अबको पुस्ताले नयाँ खोजेको छ । नयाँपन खोज्दा पुरानोपनलाई भुल्नुहुँदैन भन्ने सुझाव दिन्छन् उनले ।
दहीचिउराको प्रयोग ः
घाम रहुन्जेल असारको काम सक्न गाह्रो हुन्छ । उस्तै परे असारको मेलो सक्न रातमा समेत बत्ती बालेर काम गर्नुपर्छ । यतिबेला धेरै समय लगाएर मीठोमसिनो खानेकुरा बनाउन भ्याइँदैन । अन्य खानेकुराको जोहो गर्न सक्ने समय नहुँदा दहीचिउरा खाइन्छ । पौष्टिक खानेकुरा बनाउने फुर्सदै हुँदैन । केहीछिनमै तयार पार्न सकिने दहीचिउरा यतिबेलाको
खाजा हुन्छ ।
काम नगर्ने पनि असार पन्ध्रमा दहीचिउरा खान्छन् । यो समय जताततै हरियो घाँस हुन्छ । हरियो घाँस खाएका गाईभैँसीले धेरै दूध दिन्छन् । त्यही दूधबाट बनेको दहीले सबैको मुख लोभ्याउँछ । दहीचिउरा खानुको मज्जै बेग्लै हुन्छ, असार पन्ध्रमा ।
समयमै रोपाइँ सकिएको खुसीयालीमा भोजस्वरुप दहीचिउरा खाने चलन पहिल्यैबाट आएको हो । यो चलनले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । मानो रोपेर छोडिएको गरामा धेरै धान फलोस् भनेर दहीचिउरा खाइएको गीतानगरका कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।
उनले यसपटक दहीचिउरा खाने योजना बनाइसकेका छन् । सबैको प्रिय हुन्छ यतिबेला, दहीचिउरा । दही अमिलो भएमा चिनी पनि राखिन्छ । दहीचिउरा अनि चिनी सबैले खान्छन् मीठो मानीमानी ।
नेपालीहरुमा असार १५ मा दहीचिउरा खाए वैकुण्ठवास गइन्छ भन्ने चलन पनि छ । नेपाली समाजमा दहीलाई औषधि पनि मानिन्छ । वर्षाको समयमा पेट दुख्ने, रूघाखोकी लाग्ने बढी हुन्छ । केटाकेटी पनि यतिबेला धेरै बिरामी हुन्छन् । यस्तो बेलामा दही खाए निको हुन्छ भन्ने प्रचलन पनि छ । ठूलाठूलाले दहीचिउरा खान पाइन्छ भनेपछि केटाकेटीहरु हिलो छ्यापी खेलहरु खेल्छन् । असार पन्ध्रमा हिलो नछोए देवता रिसाउँछन् भन्ने चलन पनि छ । कोही हिलो छोएपछि मात्र दहीचिउरा खान्छन् । हिलोमा दौडने र रमाइलो गर्ने हुँदा केटाकेटीहरुले खाएको दहीचिउरा सजिलै पचाउँछन् ।
‘आयो असार पन्ध्र
गयो असार पन्ध्र
दहीचिउरा खुवाएर ।’
‘असार १५ मा दहीचिउरा, साउन १५ मा खीर’ भनिन्छ, हाम्रो समाजमा । असार पन्ध्रमा नखाएको दही अघिपछि के खाने ! भन्ने चलन पनि छ । त्यसैले, असार पन्ध्रलाई दहीचिउरा खाएर र खुवाएर मनाउनुपर्छ ।
शरीरमा नुनको आवश्यकता र मात्रा असन्तुलनमा देखा पर्ने असर
विद्यार्थी परामर्शका प्रमुख विषय [लक्ष्मणरेखा]